महाभारतमा कृष्ण यसरी बनेका थिए अजुर्नको सारथि – Karnalisandesh
प्रकाशित मितिः १३ भाद्र २०७७, शनिबार १५:२९ August 29, 2020
काठमाडौँ। पूर्वीय दर्शनको इतिहास र गरिमा बोकेको ग्रन्थ हो महाभारत। यसको कथा र यस ग्रन्थका हरेक पात्रहरुको उदारण दिएर आजका दिनसम्म पनि ब्याख्या गरिएको पाइन्छ। विषेशगरी अर्जुन र कृष्णको प्रसँग उद्वरण गरेको पाइन्छ। के हो त ? कृष्ण र अर्जुनको कथा ? यहाँ उल्लेख गरिएको छ।
महाभारत ग्रन्थका कृष्ण अर्जुन प्रशंग उल्लेख गर्न खोजिएको छ। महाभारतको युद्ध अगावै, कृष्णले कुनै पनि हतियार नउठाउने बाचा गरेका थिए। साथै, भिष्मपितामहले पनि युद्धमा सहभागी भएर अर्जुनको बध गर्ने र कृष्णलाई बाचा तोड्न बाध्य बनाउने बाचा दुर्योधनसँग गरेका थिए। अर्जुन र भिष्मपितामहको घमासान युद्ध भयो। हुन त अर्जुन पनि महावीर योद्धा थिए, तैपनि भिष्मपितामहको अगाडि उनको कुनै सीप लागेन। भिष्मपितामहले हानेको वाणले अर्जुनको कवच तोडेर धनुष पनि भाँचिदियो। भिष्मको क्रोधको अगाडि अर्जुन सहाराविहीन भैसकेका थिए।
त्यसपछि, जब भिष्मले अर्जुनलाई वध गर्नको लागि बाँण उठाए, श्रीकृष्णले सहन नसकी आफ्नो रथबाट उत्रिई रथको पाङ्ग्रा उठाएर भिष्मलाई मार्ने ध्येयले प्रहार गर्न लागे। योदेखि अर्जुनले कृष्णलाई सम्हाल्न प्रयास गरे, तर, कृष्णले आफ्नो चेलाको सुरक्षाको लागि जस्तोसुकै बाचा पनि तोड्ने कुरा गरेपछि अर्जुन स्तब्ध भएका थिए।
त्यसपछि कृष्ण आफ्नो निन्द्राबाट उठ्दा आफ्नो अगाडि अर्जुनलाई दुई हात जोडेको देखे। दुर्योधनले आफू पहिला आएको भन्दै कृष्णलाई कौरवहरूको साथ दिनलाई आग्रह गरे। तर, कृष्णले मुस्कुराउँदै, सुरुमा अर्जुनलाई देखेका हुनाले पाण्डव र कौरव दुवैको साथ दिनुपर्ने कुरा बताए। फेरि कृष्णले युद्धमा कुनै पनि हतियार नउठाउने वाचा गरेका थिए।
(महाभारतको एक अंश)